I-Forex Slippage | Yintoni ukuphuculwa kwexabiso kunye nexabiso lexabiso? FXCC
I-Forex ishicilelo ichaziwe
I-Slippage, ngokwemigangatho yokurhweba, inokuthi ichazwe ngokufanelekileyo njengokuba umyalelo uzaliswe ngexabiso elithile kwixabiso elicatshulwe ekuqaleni kwiplani yokuthengisa. Nangona kunjalo, i-slippage kufuneka ithathwe njengento ebonisa ukuba intengiso kunye nokuthengiswa kwemakethi okhethwe ngumthengisi, isebenza ngendlela ecacileyo nefanelekileyo.
Abahwebi banako ukufumana imiyalelo yabo ezaliswe ngeendlela ezintathu; kwixabiso elichanekileyo elichanekileyo, abanamava amanqabileyo - apho umyalelo wabo uzaliswa ngexabiso elingenalo, okanye amava athobayo-xa umyalelo uzaliswa ngentengo engcono kunexabiso elicatshulwe ekuqaleni. Inyaniso yokuba i-slippage ikhona kufuneka imele ithathwe njengokomelezwa ngokuqinisekileyo ukuba umthengisi udibanisa ne-marketplace esebenzayo, efanelekileyo kwaye ebonakalayo. Ngokukodwa ngokubhekiselele kwi-ECN ngokuchanekileyo ngokucwangciswa, bekuya kuba yinto engaqhelekanga kwaye impela inokukrokra, ukuba ngaba abathengisi bahlala bezaliswe ixabiso elichanekileyo.
Kwimeko enjalo kwimarike njenge-FX, ukujika kwi-5 trillion nganye ngeveki kunye nokuqhuba amashishini amakhulu eemini ngosuku, ukuvela kwendalo kunye nokulindela ukuba akukho myalelo onokuthi uhambelane ngokufanelekileyo kwindawo enjalo. Kwiindawo zokurhweba ze-ECN ezifanelekileyo kunye nebalaseleyo, idibanti yabanikezeli bee-liquidity banikezela izicaphuno ze-FX, ukunyaniseka kungashintsha ngokukhawuleza kwaye ngokuphawulekayo. Ngako oko, umyalelo uhambelana ngokukhawuleza kwixabiso elithengileyo elifumanekayo, ngamanye amaxesha kwintengo ecatshulweyo, okanye mhlawumbi kwixabiso elingcono kunalindelekileyo.
Yiyiphi i-Positive Slippage?
I-slippage enokuthi iyaziwa nangokuthi ukuphucula intengo kwaye kuyinto eyenzekayo apho ixabiso elincinci lisebenza kumthengisi.
Umzekelo, umrhwebi ubeka umyalelo wokuthenga i-1 ixabiso le-EUR / USD kwixabiso lemarike ye-1.35050, umyalelo wathunyelwa nge-platform ye-MetaTrader kumniki-mali kwaye umyalezo wokuqinisekisa uphinda uxelele umhwebi ukuba umyalelo ebulawa kwi1.35045. Ngomzekelo we-ECN / STP umthengisi uye wafumana ukuhluma okulungileyo, baye bazaliswa ngentengo engcono, ixabiso elithandekayo kumyalelo wabo wokuqala.